ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး မင်းသား ၅ ဦး!! စာဖတ်တို့ရောဘယ်သူ့ကိုရွေးမလဲ!? - JAPO Japanese News
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး မင်းသား ၅ ဦး!! စာဖတ်တို့ရောဘယ်သူ့ကိုရွေးမလဲ!?
သော 14 Feb 2020, 16:00 ညနေ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုးရီးယားမင်းသားလေးတွေကိုသဘောကျတဲ့ မိန်းကလေး၊ ယောက်ျားလေး အများကြီးရှိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာလည်း ပျိုမေတို့ရဲ့အသဲကို ဖမ်းစားမယ့် မင်းသားချောချောလေးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီတစ်ခါကတော့ မင်းသားလေးတွေကို အရင်မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်! ဒါလေးကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ဂျပန်မင်းသားချောချောလေးတွေရဲ့ fan တွေလည်း ရှိလာမလားတော့ မသိဘူးနော်!!!
စာဖတ်သူတို့အထဲမှာ ရုပ်ရှင်တို့ Drama ဇာတ်လမ်းလေးတို့ ကြိုက်တဲ့သူများရှိမလား?
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ကိုးရီးယားရုပ်ရှင်တို့ Drama တို့အရမ်းနာမည်ကြီးတယ်နော်။ ဥပမာ ဗိုလ်ကြီးတို့ !!! (ရယ်လျက်)
ကိုးရီးယားရုပ်ရှင်တွေက မြန်မာမိန်းကလေးတွေကြားမှာနာမည်ကြီးရတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ ကိုးရီးယားမင်းသားလေးတွေရဲ့ ချောမောမှုကြောင့်လို့ထင်ပါတယ်။ ကျွန်မကရုပ်ရှင်ကိုတော့သိပ်ပြီး မကြည့်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုးရီးယားမင်းသားတွေထဲမှာ Jang Keun Suk ကလွဲပြီးမသိပါဘူး။ (ရယ်လျက်)
ကိုးရီးယားနိုင်ငံနဲ့နီးစပ်မှုရှိတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ရုပ်ရှင်နဲ့ Drama တို့ကိုရောစိတ်မဝင်စားဘူးလာ?
ဂျပန်နိုင်ငံမှာလည်း ကိုးရီးယားနိုင်ငံကို အမှီလိုက်နိုင်တဲ့ မင်းသားချောချောလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်
ဒီတစ်ခါကတော့ ဂျပန်မင်းသားချောချောလေးတွေရှိတဲ့အထဲကမှ JAPO staff လေးက အကြံပြုထားတဲ့ မင်းသားချောလေး ၅ ယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်။
ဒီဆောင်းပါးလေးကိုလည်းဖတ်ပြီး စာဖတ်သူတို့ ဒီမင်းသားလေးတွေရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်း Drama တွေကို မကြည့်ရမနေနိုင်ဖြစ်သွားစေရပါမယ်။ (ရယ်လျက်)
နာမည်လေးတွေဖတ်တဲ့အခါ အရှေ့မှာရှိတာက မိသားစုနာမည်ဖြစ်ပြီး၊ အနောက်ကနာမည်ကတော့ ကိုယ်ပိုင်နာမည် ဖြစ်တယ်နော်
Sato Takeru ကတော့ အခုဆိုရင် အသက် ၃၀ ရှိပါပြီ!!! သူ့ကတော့ ၂၀၀၆ ခုနှစ်ကနေစပြီး မင်းသားအဖြစ် ရွေးချယ်ခြင်းခံရကာ အနုပညာလောကထဲ ရောက်လာပါတယ်။ 「仮面ライダー電王」” Kamen Rider Den-O” ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ ခေါင်းဆောင်မင်းသားနေရာကနေပါဝင်ခဲ့ရပြီး သရုပ်ဆောင်မှုအရမ်းကောင်းခဲ့တဲ့အတွက် အဲ့ရုပ်ရှင်ဟာပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာပဲလူကြိုက်များတဲ့ မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ ရုပ်ရှင်တော်တော်များများရိုက်လာရပြီး၊ အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆုတွေလည်း ရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ အထူးသဖြင့် 「るろうに剣心」Rurouni Kenshin လို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ရှင်က အရမ်းနာမည်ကြီးသွားတဲ့ series တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ စာဖိုမူးတစ်ယောက်အနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်ရတဲ့ ရုပ်ရှင်မှာဆိုရင်လည်း ချက်ပြုတ်တဲ့အခန်းတွေကို အစားထိုးထားတာမဟုတ်ဘဲ အားလုံးကို သူကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ထားတာပါတဲ့။ ကဲ. ပျိုမေတို့ရဲ့ အသဲကိုဖမ်းစားလိုက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။!!! (ရယ်လျက်)
ချောတာတစ်ခုပဲမဟုတ်၊ အက်ရှင်ပိုင်းမှာလည်း ကျွမ်းကျင်စွာနဲ့ သရုပ်ဆောင်နိုင်သူတစ်ယောက်ပါ။
မင်းသားရဲ့ လက်ရှိအသက်ကတော့ ၂၆ နှစ်ရှိပါပြီ။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝအထိ ဘောလုံးလက်ရွေးစင် ကစားသမားဖြစ်ချင်ခဲ့တာပါ။
၂၀၁၃ ခုနှစ်ကနေစပြီး မော်ဒယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အနုပညာလောကထဲ ရောက်လာပြီး၊ 「ひよっこ」Hiyokko,「過保護のカホコ」Overprotected Kahoko စတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေနဲ့ ပွဲဦးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ မင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ လည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို အပြည့်အဝရလိုက်ပါသေးတယ်။
အရပ်ကတော့ 185 cm ဖြစ်ပြီး အရပ်ကလည်းရှည်၊ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်ကလည်းချောမောတဲ့အတွက် မော်ဒယ်လုပ်နေတုန်းမှာပဲ မိန်းကလေးပရိသတ်တော်တော်များများကို ရရှိလိုက်ပါတယ်။ ချောတယ်နော်!!!
ဒါကတော့「センセイ君主」Sensei Kunshu ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်မှာ ဆရာနေရာကနေသရုပ်ဆောင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုချောတဲ့ဆရာသာ ကျောင်းမှာရှိရင် ကျောင်းသူတွေနေတိုင်းကျောင်းမှန်မှန်တက်ကြမှာပဲနော်!!!
လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ အသက် ၂၅ နှစ်ရှိပါပြီ။ အလယ်တန်းကျောင်းသားဘဝက တိုကျိုမှာမင်းသားအနေနဲ့ ရွေးချယ်ခြင်းကိုခံရပြီးတော့ အဲ့ဒီကနေစပြီး အနုပညာအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ မော်ဒယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့လည်း လှုပ်ရှားမှုတွေရှိသလိုပဲ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ ခေါင်းဆောင်မင်းသားတစ်ဦးအနေနဲ့ စပြီးရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရပါတော့တယ်။ 「ヒロイン失格」Heroine Shikkakuや「orange」စတဲ့ကားတွေမှာပါဝင်ရပြီး ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ၃၉ ကြိမ်မြောက် အကယ်ဒမီမှာ New Actor Award ဆုကိုရရှိပိုင်ဆိုင် ခဲ့ပါတယ်။
မနှစ်က ၂၀၁၉ ခုနှစ် ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ 「キングダム」Kingdom ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကလည်း အရမ်းကိုနာမည်ကြီးပြီး လူကြိုက်များတဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီးသူဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ Movie sites ဖြစ်တဲ့ 「TC Candler」နဲ့「最もハンサムな顔１００人」100 most handsome faces မှာ အဆင့် ၈၁ ကို ပထမဆုံးအကြိမ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာကတောင်အသိအမှတ်ပြုတဲ့ ဒီမင်းသားချောချောလေးကိုလည်း အားပေးကြည့်ရအောင်လား?
သူကတော့ အသက် ၂၈ နှစ်ရှိပါပြီ။ MEN’S NON-NO ဆိုတဲ့ ဂျပန်မဂ္ဂဇင်းမှာ မော်ဒယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အစပြုခဲ့ပါတယ်။ မဂ္ဂဇင်းရဲ့ သီးသန့်မော်ဒယ်ကိုတော့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အထိ ၆ နှစ်အကြာလုပ်ခဲ့ပြီးတော့၊ ရုပ်ရှင်မင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ကတော့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်လောက်မှာ အစပြုခဲ့တာပါ။ အချိန်အနည်းငယ်လေးအတွင်းမှာပဲ နာမည်ကြီးမင်းသားတစ်ဦးတောင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၇ ခုနစ်မှာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ 「君と１００回目の恋」100th love with you ရုပ်ရှင်နဲ့ ၂၀၁၈ ခုနစ်မှာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ 「今夜、ロマンス劇場で」Tonight at the Romance Theater ရုပ်ရှင်မှာ နာမည်ကြီး star တစ်ဦးအနေနဲ့ အသိအမှတ်ပြုခံရလာပါတယ်။
ရုပ်ရှင်တွေတစ်ကားပြီးတစ်ကားရိုက်ပြီး အခုထိအနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေထဲမှာ ရှိနေတုန်းပဲနော်!
သူလေးကတော့ လက်ရှိအသက်က ၂၆ နှစ်ပါ။ လက်ရှိဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ မိန်းကလေးတွေကြားမှာ အကျော်ကြားဆုံးလို့ပြောရင် မမှားနိုင်ပါဘူး။ မိခင်ရဲ့အားပေးမှုနဲ့ အစမ်းသရုပ်ဆောင်မှုမှာဝင်ပြိုင်ပြီး ဆုရရှိတာကနေ အနုပညာလောကထဲကို ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်စိတ်ပါပြီး အစပြုခဲ့တဲ့အလုပ်မဟုတ်တဲ့အတွက် အသက် ၁၅ နှစ်လောက်နဲ့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ရပြီး ရုပ်ရှင်မင်းသားဆိုတဲ့အလုပ်ကို မကြိုက်ခဲ့ပေမဲ့၊ အဓိကမင်းသားနေရာကနေပါဝင်ပြီးနောက်မှာတော့ stage ဆင်မြင့်ကြောင့်ပဲ စိတ်ပြောင်းသွားပြီး သရုပ်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်တာတွေကို ပိုပိုပြီးသိချင်စိတ်တွေ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီမင်းသားဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ကနေစပြီး သူ့ရဲ့သရုပ်ဆောင်မှုတွေဟာလျင်မြန်စွာနဲ့ပဲ တိုးတက်လာပြီးတော့ အဲ့ဒီနှစ်မှာပဲ ဇာတ်ကားပေါင်း ၈ ခုကိုလက်ခံရိုက်ကူးခဲ့ရပါတယ်။ Manga ကိုလည်းရိုက်ကူးပြီး 「あのコの、トリコ」Anoko no Toriko နဲ့ ၊ နာမည်ကြီးမင်းသမီးနဲ့အတူတွဲ သရုပ်ဆောင်တဲ့ 「リバーズ・エッジ」River’s Edge ဇာတ်ကားမှာလည်း သူ့ရဲ့ သရုပ်ဆောင်စွမ်းကို လူအများကချီးကျူး အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။
နောက်ထပ် လူကြိုက်များတဲ့ anime ဖြစ်တဲ့ 「銀魂」Gintama ကိုရုပ်ရှင်အနေနဲ့ပြန်ထားတဲ့ကားမှာလည်း သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီကားလေးလည်း တော်တော်ကိုကျော်ကြားခဲ့ပါတယ်။
ချောတဲ့အပြင် သရုပ်ဆောင်မှုကလည်းအရမ်းကောင်းတဲ့အတွက် ငယ်ရွယ်မိန်းကလေးပရိသတ်တွေကြားမှာ နာမည်ရလာပြီး သူ့ရဲ့နောက်ထပ်ထွက်ရှိမယ့် ဇာတ်ကားတွေကိုတောင် မျှော်လင့်တကြီးတောင်းဆိုခြင်းခံရပါတယ်။
စာဖတ်သူတို့ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ။ ဒီမင်းသားတွေထဲမှာရော သဘောကျသွားတဲ့သူရှိပါသလား?
မိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်အများကြီးရှိပါသေးတယ်ပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့အခုမိတ်ဆက်ပေးသွားတဲ့ မင်းသားလေးတွေကိုကြည့်ပြီး ဂျပန်ရဲ့ရုပ်ရှင်လောကကိုလည်း စိတ်ဝင်စားမယ်ဆို အခုပဲ ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါတော့နော်!!!
ParaDo Quick Remover Sponge In
FleurWhite Body Cream
ဂိမ်းတွေဟာ ဂျပန်ယဥ်ကျေးမှုကို ကိုယ်စားပြုတဲ့အနေနဲ့ သတ်မှတ်တဲ့ခေတ်ကို ရောက်လာ !
မြန်မာနိုင်ငံမှာ deaf soccer နည်းပြအဖြစ် သင်ကြားပေးနေတဲ့ ဂျပန်လူမျိုး
127kg ကိုပေါ့တယ်လို့ပြောတဲ့ အသန်မာဆုံးအဖွား
IT နဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ အမိုက်ဆုံး ကစားနည်းများ
ပိုက်ဆံမရှိတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ကိုယ်စားပြု Rugby အသင်း
စိတ်ဖိစီးတဲ့အခါ ပေါက်ကွဲဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း
ဘေ့စ်ဘောပွဲကြည့်ရင်းနဲ့ ဘီယာလေးသောက်ရအောင် ！
မေမေချစ်တဲ့သားတွေပိုပြီးများလာတဲ့ မျက်မှောက်ခေတ်ဂျပန်နိုင်ငံ !!! ချစ်သူကောင်လေးက ဒီလိုပုံစံဆိုရင်ရွေးချယ်နိုင်ပါ့မလား?
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ animation လေးတွေကို ဖန်တီးသူ “Studio Ghibli” အကြောင်းသိကောင်းစရာ!!!
နှင်းတွေအပြင်းအထန်ကျတဲ့နေရာမှာ ကြုံရတဲ့ဒုက္ခနဲ့ နှင်းတွေကိုချစ်သင့်တဲ့အကြောင်းအရင်း!!